Meyanmar haha — Steemit
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Trump အမေရိကန်မက္ကဆီကန်နယ်စပ်မှ 2,000 အကြားနှင့် 4000 အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့တပ်တွေစေလွှတ်စဉ်းစားအဖြစ်, နယ်စပ်မြို့များတွင်နေထိုင်သူများနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတွေသူတို့ကသတင်းတွေအကြောင်းရောထွေးခံစားခကျြကဆိုသည်။
အခြို့သောဖက်ဒရယ်အစိုးရအနေဖြင့်ထောက်ခံမှုကြိုဆိုပါတယ်နေစဉ်, အခြားသူတွေကအရင်းအမြစ်များကိုတစ်ဦးစွန့်ပစ်လိမ့်မယ်ခံစားရသည်။ ဤတွင်သူတို့ထဲကတချို့က CNN သို့ပြောကြားခဲ့သည်ယျ။ '' ဒါဟာဘာမှပြောင်းလဲမသွားမ '' တစ်ခုချင်းစီကိုညဥ့်, နိုင်ငံသားသတင်းစာဆရာပြစ်ကိလ Villarreal သူမ၏ပရိသတ်အတွက် Facebook ကိုကျော်ကားတစ်စီးမတော်တဆမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းများ၏ဗီဒီယိုဖိုင်တိုက်ရိုက်လွှရန် Laredo တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏လမ်းများမှကြာပါသည်။
တခါတရံနှောင်းပိုင်းနာရီအတွင်းက၎င်း၏ဦးခေါင်း rears သောမှောင်မိုက်အားနည်းချက်တွေ - - သူမ၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်သူမနယ်စပ်ဖို့ပိုတပ်များမပို့သော်လည်းအကျိုးမရှိယုံကြည်မှုပါပဲ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအဖြစ်လူသိများ Villarreal, "အားလုံးရိုးသားမှုခုနှစ်, ငါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်နိမိတ်မှအပိုလုံခြုံရေးပေးပို့ခြင်းဘာမှဖြေရှင်းမယ့်စဉ်းစားကြဘူး" 'LaGordiloca,' က CNN ရဲတပ်ဖွဲ့အလင်းအိမ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်၏နောက်ခံဆန့်ကျင်သို့ပြောသည်။ သူမသည်ကားပျက်ကျမှု၏မြင်ကွင်းတစ်ခုမှာ, နှင့်မော်တော်ယာဉ်, လို့သူကပြောပါတယ်,
အထောက်အထားမဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသယ်ဆောင်ခဲ့သညျ။ ဒါဟာ Laredo အတွက်ဘုံမျက်မှောက်ရဲ့ Villarreal ကဆိုသည်။ ထို့နောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကသူအမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက်သူ့အရင်နှစ်ခုစလုံးအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားလုပ်ရပ်များနှင့်အညီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ပြောင်းရွှေ့ကူညီရန်ပေးပို့ခြင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ကြာသပတေးနေ့တွင်ပြောကြားသည်။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏ယာဉ်တန်းကိုအမေရိကန်နယ်စပ်ဘို့ချည်နှောင်လျက်ထိုသူအချို့နှင့်အတူအလယ်ပိုင်းအမေရိကကတဆင့်သူ့ရဲ့လမ်းကိုအဖြစ်သူ၏ထင်မြင်ချက်များကိုလာကြ၏။
Related အပိုဒ်: ဤတစ်ယာဉ်တန်းအတွက်မက္ကစီကိုဖြတ်ကူးဗဟိုအမေရိကန်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာ "ကျနော်တို့ကဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖို့အသုံးပြုပါတယ်," Villarreal သူမကဟုခေါ်တွင်သည့် Laredo အတွက်မလုံခြုံသလိုခံစားရတယ်ဘယ်တော့မှရဲ့စိတ်ဖိစီးမီ, "ဟုတစ်ဦးအလွန်လုံခြုံ, တင်းကျပ်စွာခညျြနှောငျအသိုင်းအဝိုင်း။ " သူမ၏စိတျအပိုငျးအဘို့, Villarreal သူမကဒေသခံဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်အမေရိကန်နယ်စပ်ကင်းလှည့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကူးနေကြသမျှကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ယုံကြည်သည်ဟုဆိုသည်။
"ကျနော်တို့မြို့မှာဖြစ်ပျက်ရဲ့သမျှကိုဖုံးလွှမ်းရန်မြို့မှာအလုံအလောက်အခွင့်အာဏာရှိသည်," ဟုသူမကက CNN သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ Trump ရဲ့ကြေညာချက်အများအပြား Laredo နေထိုင်သူများ၏အာရုံကိုဆည်းပူးခဲ့ပါသည်, Villarreal ကဆိုသည်။ တချို့ကတပ်များတစ်ဦးရောက်လာမြို့ကိုပြောင်းလဲမှုကိုငါမရောက်စေထင်နှင့်ဖက်ဒရယ်ပိုက်ဆံတစ်ဦးစွန့်ပစ်မယ့်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမ "သဘောမတူကြောင်း Laredo အတွက် Trump ကိုထောက်ခံသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ " ကဆက်ပြောသည် '' ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတယုံကြည်စိတ်ချ '' Hector Garza, Laredo မြို့အနီးအမျိုးသားနယ်စပ်ရေးရာကင်းလှည့်ကောင်စီပြည်ထောင်စုများအတွက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်, နယ်စပ်ကင်းလှည့်က၎င်း၏ Congressional ပြဌာန်းနိမ့်ဆုံးခန့် 2,000 အေးဂျင့်တိုတောင်းကြောင်းထောက်ပြသည်။ သူနဲ့သူ့ပြည်ထောင်စု - အကြောင်းကို 18,000 အေးဂျင့်ကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်သည်နှင့်အညီ, နှင့် 2016 ရွေးကောက်ပွဲတွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတထောက်ခံ - ကရနိုင်မဆိုအကူအညီတောင်းယူပါလိမ့်မယ်။ "သူတို့စစ်ဆင်ရေးအတွက်နယ်စပ်ကင်းလှည့်အေးဂျင့်ကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးတစ်စုံတစ်ရာကျနော်တို့ကသမ္မတ Trump ကနေကြိုဆိုပါတယ်" Garza ကဆိုသည်။ Garza ကနယ်စပ်တလျှောက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆင်ရေးမှကြွလာအထူးသဖြင့်လာသောအခါတပ်များ, လူအင်အားနှင့်အရင်းအမြစ်များပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်အေးဂျင့်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ကဆိုသည်။ Related အပိုဒ်: နယ်စပ်ရေးရာကင်းလှည့်ပါကဖြည့်လို့မရဘူးတံခါးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ် အမှုအရာအခုရပ်အဖြစ်ဒါပေမယ့်သူကဆိုသည်ကသင့်လျော်သောလူအင်အားမရှိဘဲထိထိရောက်ရောက်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များလုပ်နေတာဆက်လက်နယ်စပ်အေးဂျင့်များအဘို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါငွေ, Garza ကလည်း, ကောင်းစွာသုံးစွဲမည်ဖြစ်သည်။ "ကျနော်တို့က Trump ကထိရောက်ထုံးစံ၌ပြုသောအမှုခံရဖို့သွားမယ့်အကြောင်းစကားပြောဖြစ်ပါတယ်သောဤစစ်တပ်ဖြန့်ကျက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်စပ်ကင်းလှည့်အေးဂျင့်များနှင့်အမေရိကန်အများပြည်သူကူညီပေးပါမည်ကြောင်းကိုအလွန်ယုံကြည်ထားပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ အဆိုပါ Trump အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနသမ္မတဘုရ်ှနှင့်သမ္မတအိုဘားမားပေါင်းစပ်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုမို $ 1.3 ဘီလီယံကစစ်ရေးဖြန့်ကျက်ကုန်ကျမည်ဟုဘယ်လောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေ, ဒါပေမယ့်များထားရှိဖြေဆိုရန်ရသေးရှိသည်။ "ဒါဟာနယ်စပ်တစ်ဥပဒေမဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု Garza ကဆက်ပြောသည်။ "ကျနော်တို့လူ 50 လုပ်စရာမလိုဘူး, တစ်နာရီအတွင်းဖြတ်ပြီးရတဲ့, သူတို့အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သို့လာကြတဲ့အခါ, တစ်ဥပဒေမဲ့နယ်စပ်ပါပဲ။ " ရဲအရာရှိကပိုက်ဆံတစ်ဦးစွန့်ပစ်မယ့်ပြောပါတယ် ရဲအရာရှိတွမ် Schmerber ယခုခြောက်နှစ် Maverick ကောင်တီ, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, Laredo ၏မြောက်ဘက်၏ရဲအရာရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးနယ်စပ်ကင်းလှည့်အေးဂျင့်အဖြစ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအများစုသုံးစွဲခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူကတစ်ခါတစ်ရံတွင်နယ်စပ်အပေါ်တပ်စွဲနေသောစစ်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူဘေးချင်းယှဉ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ထောက်ခံမှုမျိုးမရှိတော့လိုအပ်သည် Schmerber က CNN သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ "အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ။ " မိမိအခရိုင်နေထိုင်သူများ, Schmerber ကလည်း, နယ်စပ်ကင်းလှည့်ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းဥပဒေဘက်တော်သားများ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှလုံခြုံကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ကြသည်။ ဗီဒီယို Play နယ်စပ်ရေးရာရဲအရာရှိ: စောင့်တပ်ဖြန့်ကျက်မလိုအပ်သော 03:13 "ငါသည်နယ်စပ်ကင်းလှည့်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "ကျနော်တို့ဒီမှာနယ်စပ်မှာစစ်တပ်မလိုအပ်စဉ်းစားကြဘူး။ " Schmerber သူသုံးစွဲငွေကိုပိုကောင်းတဲ့နယ်စပ်တလျှောက်ကဒေသခံရဲအရာရှိ '' ရုံးများအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ယုံကြည်သည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ကပုံမှန်အား understaffed နှင့်ထိရောက်စွာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်နည်းပညာကင်းမဲ့ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကပစ္စည်းကိရိယာတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်" ဟုသူ Rio Grande စသောသူ၏လက်ထောက်အစားန်းကျင်ရုမ်းမင်း၏, ရုံးကနေစောင့်ကြည့်နိုင်မယ့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မယ်ကင်မရာများမှညွှန်ပြဟုဆိုသည်။ "နည်းပညာကျနော်တို့အခုအချိန်မှာမလိုအပ်အရာဖြစ်တယ်။
ninengantawsammat useinhcein Trump aamayrikaan mak k se kaannaalhcautmha 2,000akyarrnhaint 4000 aamyoesarrahcaung tauthpwal tauttway hcaylwhaat hcain hcarr aahpyit, naalhcaut myahoetmyarrtwin nayhtinesuumyarr nhang tararrupadayhcoemoerayy aararshitway suuthoet k satainn twayaakyaungg raw htway hkanhcarr hk kyaya k sosai .ahkyahoet saw hpaatdaraal aahcoeranay hpyint htouthkanmhu kyaosopartaal nayhcain, aahkyarrsuutway k aarainnaamyitmyarr ko tait u hcw ant pait lain maal hkanhcarrr sai . itwin suuthoet htellkatahkyahoetk CNN shoet pyawwkyarrhkaesai yya . '' darhar bharmha pyaungglell m swarrm '' taithkuhkyinn hce ko ny in, ninengansarr satainnhcarsarar pyit kil Villarreal suumeatparisaataatwat Facebook ko kyaw karrtaithcee matawtasamhu nhaint rarjawaatmhu myinkwin myarreat bedeyohpine titerite lwharaan Laredo takk saat pyinaal eat lammyarr mha kyaar parsai . tahkartaran nhaawinnpine narreaatwin k ၎inneat uhkaungg rears saw mhaawin miteaarrnaeehkyettway - - suumeat aasineaawine nhang rainnnhaee kyawm wain suu aamyoesamee tait u aahpyit suu m naalhcaut hphoet po tautmyarr m phoet sawlaee aakyoemashi yonekyimhu parpell . hthoetaapyin tait u aahpyitluusimyarr Villarreal, " aarrlone roesarrmhu hkunhait, ngar, kyawantawthoetrae naalnimate mhaapo lonehkyuanrayy payyphoethkyinn bharmha hpyayshinn m ae hcain hcarr kya bhuu" 'LaGordiloca,' k CNN relltauthpwal aalainnaain mhaatetote mhaatetote eat nouthkan s ant kyin shoetpyawwsai . suumasai karr pyetkyamhu eat myinkwintaithku mhar, nhang mawtaw yarin, lhoet suu k pyawwpartaal, aahtoutaahtarr mae shwaepyaungg nayhtinesuu saalsaung hkae s nyya . darhar Laredo aatwat bhone myetmhaoutrae Villarreal k sosai . hthoetnout ninengantawsammat u seinhcein k suu aamyoesarrahcaung tauthpwal naalhcaut lonehkyuanrayyaatwat shu aarainnhait hkuhcalone aarr hpyint hkawsaungswarr loterautmyarr nhanganye hpyit lain maallhoet tait pyaunggshwae kuunyeraan payyphoethkyinn hcain hcarr hkaepartaal kyaarsapatayynaetwin pyawwkyarrsai . shwaepyaungglotesarr myarreat yarintaann ko aamayrikaan naalhcaut bhhoet hkyainhaawin lyet htosuu aahkyahoet nhaint aatuu aalaalpine aamayrik k t saint shurae lam ko aahpyit suueat htainmyinhkyetmyarr ko lar kyaeat . Related aapod: i tait yarintaann aatwat mak k hce ko hpyat kuu baho aamayrikaan shwaepyaunggaalotesamarrtwayhar " kyanawthoet k iamhu aalonehconethoetko hphoet aasonepyu partaal," Villarreal suumak hu hkaw twinsany Laredo aatwat m lonehkyuan salo hkanhcarrrataal bhaaltotmha rae hcate hpi hcee me, " hu tait u aalwan lonehkyuan, tainnkyauthcwar hk nyyaya nhaaw ngya aasineaawine . " suumeat hci tyaapongyaabhhoet, Villarreal suumak daysahkan upadayhcoemoerayy aaygyinhcemyarr nhaint aamayrikaan naalhcaut kainn lha eet shwaepyaungg nayhtinesuu naalhcaut ko hpyat kuu naykya samyaha ko kinetwal hteinsaim nine yonekyisai husosai . " kyanawthoet myahoetmhar hpyitpyet rae samyaha ko hpone lwham raan myahoetmhar aaloneaaloutahkwin aarnar shisai," hu suumakak CNN shoet pyawwkyarrhkaesai . Trump rae kyaynyarhkyetaamyarraapyarr Laredo nayhtinesuumyarreat aarrone ko saee puu hkaeparsai, Villarreal k sosai . tahkyahoetk tautmyarr tait u routlar myahoetko pyaungglellmhu ko ngar m routhcay htain nhang hpaatdaraal pitesan tait u hcw ant pait m ae yonekyipartaal . darpaymaae suum " sabhawmatuukyaungg Laredo aatwat Trump ko htouthkansuutway aamyarrkyeeshipartaal . " kasaatpyawwsai '' kyawantawthoetrae ninengantawsammat yonekyihcatehkya '' Hector Garza, Laredo myahoet aanee aamyoesarr naalhcautrayyrar kainn lha eet kaunghce pyihtaunghcu myarraatwat pyaww hkwin r puggol, naalhcaut kainn lha eet k၎inneat Congressional pyahtarann ni m sonehkaant 2,000 aayy gya int to taungg kyaungg htoutpyasai . suu nae shupyihtaunghcu - aakyaunggko 18,000 aayy gya int ko kohcarrpyu htarrtae ၎inneat at bh site sai nhanganye, nhang 2016 rwaykoutpwaltwin ninengantawsammatahtouthkan - k r nine m so aakuuaanyetaungg yuu par lain maal . " suuthoet hcaitsainrayy aatwat naalhcaut kainn lha eet aayy gya int ko htaw kya pan manyya hpwhcyakwayarngya taithconetaitrar kyanawthoet kasammat Trump k nay kyaosopartaal" Garza k sosai . Garza k naalhcaut t shout hcaung kyi hcaitsainrayy mha kyaw lar aahtuu s hpyint lar sawaahkar tautmyarr, luuaainaarr nhaint aarainnaamyitmyarr panpoe hkyinn aarr hpyint aayy gya int ko htoutpan nine k sosai . Related aapod: naalhcautrayyrar kainn lha eet par k hpya eet lhoet marabhuu tanhkarr htaungpaunggmyarrhcwar eatshipartaalamhuarar aahku raut aahpyit darpaymaae suu k sosai k saint lyaw saw luuaainaarr mashibhell htihtiroutrout ၎innthoeteat aaloteaakinemyarr lotenaytar saatlaat naalhcaut aayy gya intmyarrabhhoet mahpyitninebhuu . aasopar ngway, Garza kalaee, kaungghcwar sonehcwal maihpyitsai . " kyanawthoetk Trump k htirout htonehcan pyusawamhu hkanr hphoet swarr m ae aakyaungg hcakarrpyaww hpyitpartaal saw i hcaittaut hpya ant kyet aoutmhar kyawantawthoetrae naalhcaut kainn lha eet aayy gya intmyarr nhaint aamayrikaan aamyarrpyisuu kuunyepayypar mai kyaunggko aalwan yonekyi htarrpartaal" hu suu kapyawwsai . aasopar Trump aotehkyaoterayy nhaint aamimyay lonehkyuanrayy htarn sammat bhur ha nhaint sammataaobharrmarr paungghcaut konekyahcarate htaatpomo $ 1.3 bheleyan k hcaitrayy hpya ant kyet konekya maihu bhaallout nae paatsaattae mayyhkwanntway, darpaymaae myarr htarrshi hpyay so raan rasayy shisai . " darhar naalhcaut tait upadaymae taithcatetaitpine hpyitpartaal" hu Garza k saatpyawwsai . " kyanawthoetluu 50 lotehcarar malobhuu, taitnarreaatwin hpyatpyee ratae, suuthoet aaungmyinhcwar kyawantawthoetrae pyi shoet lar kya taeaahkar, tait upadaymae naalhcaut parpell . " rellaararshi k pitesan tait u hcw ant pait m aepyawwpartaal rellaararshi twm Schmerber yahku hkyawwatnhait Maverick kaung te, takk saat pyinaal, Laredo eat myawwatbhaat eat rellaararshi hkae paymaae tait u naalhcaut kainn lha eet aayy gya int aahpyit suueat aasaatmwaywamkyaungg aamyarrhcu sonehcwal hkaesai . aelldeaahkyanetonek suu k taithkartaitran twin naalhcaut aapaw tauthcwal naysaw hcaittaut puggolmyarr nhaint aatuu bhayy hkyinn yhain aalotelotehkae partaal . shoetsaw htouthkanmhu myoe mashitotloaautsai Schmerber k CNN shoet pyawwkyarrhkaesai . " aararaarrlone pyaungglell swarrpye . " mimiahkarine nayhtinesuumyarr, Schmerber kalaee, naalhcaut kainn lha eet hkyinn nhaint pyitwin upadaybhaattawsarr myarreat kyaoepam aarrhtotemhu mha lonehkyuan kyaayyjuutainhcakarr hpyitkyasai . bedeyo Play naalhcautrayyrar rellaararshi: hcaung taut hpya ant kyetmaloaautsaw 03:13 " ngarsai naalhcaut kainn lha eet kaungghcwar tautsainhtarr kaunggmwanhcwar lae kyint sainkyarr hpyitkyaungg htainpartaal" hu suu kapyawwsai . " kyanawthoet demhar naalhcautmhar hcaittaut m loaaut hcain hcarr kya bhuu . " Schmerber suu sonehcwal ngway ko pokaungg tae naalhcaut t shout k daysahkanrellaararshi '' ronemyarr aarr hpyint aasonepyuswarrmai nine yonekyisai husosai . suuthoet k ponemhaanaarr understaffed nhaint htirouthcwar naalhcauthpyatkyawmhu hcaung kyi hphoet loaaut naeepanyar kainnmae partaal . " kyanawthoet k pahchcaee kiriyar twayaamyarrkyee loaautpartaal" husuu Rio Grande hc saw suueat laathtout aahcarr ann kyin rum mainn eat, rone k nay hcaung kyi nine m ae maunggsuumae lay yarin ko hcaung kyi ninemaal kainmararmyarr mha nywhaan pya husosai . " naeepanyar kyanawthoet aahkuaahkyanemhar m loaautarar hpyittaal .